Ihe na-arụ ọrụ maka mmekọrịta mmekọrịta | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 11, 2012 Monday, September 10, 2012 Jenn Lisak Golding
Anyị ikpo okwu ahia ọdịnaya onye ahịa, Compendium, chịkọtara data gafee Facebook, Twitter, na LinkedIn iji hụ ihe kacha arụ ọrụ maka mmekọrịta mmadụ na oge, ụbọchị izu, na ihe ị ga-ekwu. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe nchọpụta ndị a abụghị ihe mgbagwoju anya, enwere m mmasị na mmasị dị iche iche na Twitter na LinkedIn. Dị ka infographic ahụ si egosi, iji mkpu eme ihe na-akpata nnukwu pịa site na LinkedIn, mana ọ na-eme ihe megidere Twitter. Ọzọkwa, iji nọmba na tweet na-ebute 50% karịa pịa gafere, mana ọ nweghị ezigbo mmetụta ma ọ bụrụ na ejiri ya na melite ọnọdụ LinkedIn.
Kedu ka Compendium si chịkọta nchọpụta a niile? Ha mere nyocha nke onwe ha, nke emere ka oburu “Ntuziaka B2B & B2C na Social Sharing, ”Nke dị ugbu a iji budata ya.
Kedu ihe kachasị ịtụnanya banyere nyocha achọtara na infographic a?
Tags: b2bb2cInfographics Ahịammekọrịta mmadụ na ibe ya
Sep 13, 2012 na 5: 02 AM
kedu ihe ọ bụ na onyonyo? ọ dị ka ọ na-ebu ọkara
Sep 13, 2012 na 5:06 PM
Seeinghụghị nsogbu ọ bụla ebe a Anastasia!
Sep 18, 2012 na 7: 52 AM
oh, ndo, Douglas, ugbu a odi mma 🙂